Maxay dhalooyinka khamriga cagaaran, bunni iyo cadaan u yihiin
Waqtiga boostada: Jun-25-2021
Markii aad badanaa iibsato khamri, waxaad arki doontaa farqi weyn oo u dhexeeya midabka dhalada khamriga.Qaar waa cagaar, qaar waa bunni, qaarna waa cadaan.Macamiisha qaar waxay u maleynayaan in dhalooyinka cagaaran iyo buniga ah ay ilaalinayaan iftiinka. dhalooyinka buniga ah waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin quali aad u wanaagsan ...Akhri wax dheeraad ah »
Waxyaabaha saameeya tayada dhalooyinka
Waqtiga boostada: Juun-23-2021
Dhalada oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka khamriga, muuqaalka naqshadda baakadaha dhalada ayaa si gaar ah muhiim u ah Maalmahan, dhalada khamriga ayaa aad iyo aad u midab badan, waxaana jira muuqaal barwaaqo leh oo ubaxyo u tartamaya qurux. dhalooyinka, waa inaan bixinnaa qadarka ...Akhri wax dheeraad ah »
Dood ku saabsan habka kormeerka dhalada dhalada ah
Inta badan soosaarayaasha dhalada galaaska ee warshadda wax soo saarka, waxay macaamiisha ku qaabili doonaan dhibaatooyin kala duwan oo xagga tayada soo saarka ah, kuwaas oo keenaya cabashooyinka macaamiisha, taasoo u horseedaysa khasaare labada dhinacba ah. Sababaha loo eedeeyo: inta badan habka wax soo saarka, oo ay sababto xakamaynta tayada aan habboonayn Hadda wax soo saarka ...Akhri wax dheeraad ah »
Sida loo tijaabiyo tayada dhalada quraaradaha khamriga
Dhalada dhalada waa nooc ka mid ah baakadaha baakadaha kaas oo ku badan warshadaha khamriga. Isla mar ahaantaana, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa nolosheena maalinlaha ah.Laakiin maxaa yeelay warshadda dhalada dhalada ah ee suuqa ku taal aad bay u badan tahay, waxay u keentaa qofka isticmaala inuu awoodi waayo inuu iibsado badeecada qiimo dhab ah iyo tayo wanaagsan oo ku saabsan l ...Akhri wax dheeraad ah »
Dhalooyinka biirka muddo dheer ayaa loo isticmaali jiray inay ahaadaan bambooyin waqtiyeysan
Waqtiga boostada: Jun-04-2021
Cimilada ayaa kululaaneysa, isticmaalka biirka sidoo kale wuxuu galay xilligii ugu sarreeyay, iyadoo la fiirinayo tayada biirka, haddii aad dareentay nolosha shelf ee dhalooyinka biirka? Falanqaynta khabiirka muraayadaha dhalada ayaa tilmaamey in meelwalba oo dhacda qaraxyada dhalada ee biir ku dhaca, ubiq ...Akhri wax dheeraad ah »
Xereen habka dhalada khamriga
Waqtiga boostada: Jun-01-2021
Qalabka wax lagu buufinayo ee dhalada dhalada ah guud ahaan wuxuu ka kooban yahay qolka lagu buufiyo, silsiladda ganaaxa iyo dhalooyinka oven.Glas iyo daaweynta hore ee biyaha, dhalooyinka dhalada ah waxay si gaar ah ugu baahan yihiin in fiiro gaar ah loo yeesho dhibaatada wasakhda wasakhda. Tayada sida loogu buufiyo dhalada galaaska, iyo daaweynta biyaha, ...Akhri wax dheeraad ah »
Habka lagu ogaanayo tayada dhalada quraaradaha khamriga
Dhalada dhalada waa nooc ka mid ah baakadaha baakadaha oo ku badan warshadaha khamriga. Isla mar ahaantaana, sidoo kale waxaa si ballaadhan loogu adeegsadaa nolol maalmeedkeenna. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah waxaa jira warshado dhalo badan oo dhalo ah oo suuqa ku jira, dadka isticmaala ma iibsan karaan alaabada qiimo wanaagsan badeecooyin Wanaagsan oo jaban, ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay shaqada hoose ee godka dhalada quraaraddu?
Dhalada dhalada ee khamriga ah waxay dhalatay bilowgii qarnigii 17aad. Adeegsiga ugu horreeya ee dhalada dhalada waxay ahayd champagne. Sannadkii 1724, dawladda Faransiisku waxay u oggolaatay champagne ku madoobaaday dhalooyin inay iibiso. Bishii Meey 25, 1728, khamriga loo yaqaan 'champagne wine' ayaa lagu iibiyey dibedda iyadoo uu boqorka fasax ka haysto. 1728, Frenka ...Akhri wax dheeraad ah »
Maxay yihiin sababaha dhalida dhalooyinka quraaradaha
Soo saarida dhalooyinka dhalada ah, farsamada wax soosaarka aan caadiga aheyn ama arimo kale oo dibada ah ayaa cilado ku keeni doona dhalooyinka, dusha sare ee dhalooyinka ma ahan kuwo siman oo nadiif ah, waana mid ka mid cilladaha guud. 1.Markay muraayadda madhan ku dhacdo caaryada hore, si sax ah uma noqon karto ...Akhri wax dheeraad ah »
Soo saarida dhalada farsamada dhalada.
Dhalada farshaxanka ah ee dhalada ah hada dhalada midabkeedu aad ayey u sii badan tahay, dad aad iyo aad u fara badan ayaa fiiro gaar ah u leh, nooca khamriga ah ee lagu doorto nooca dhalada ah, sida khamriga cad oo leh dhalo dhalo ah oo hufan, Maotai dhalo badan oo caano badan leh, biir ayaa loo isticmaalaa leh dhalo midab ah Xulitaanka sida ku xusan ...Akhri wax dheeraad ah »
Maxaad ugu doorataa dhalooyinka quraaradaha khamriga
Xulashada dhalada ee dhalooyinka quraaradaha ah, qayb ka mid ah sababtu waxay ka timaaddaa muuqaalkeeda, muuqaal cad oo muuqaal ah, muuqaalka jawiga wax lagu beddelo ee cajiibka ah, ayaa si weyn u wanaajin kara baakadaha khamriga, qabashada indhaha macaamiisha, ka dibna hagaajiya iibka; Marka lagu daro , maxaa yeelay glas ...Akhri wax dheeraad ah »
Saamaynta dhalada galaaska khamriga
Dhalooyinka quraaradaha kala duwan ee kala duwanaanta halabuurka kiimikada ayaa sidoo kale ka weyn, dhalada qaybo badan oo ka mid ah habsami u socodka haynta khamrigu way sii yaraan doontaa ama ka yaraan doontaa khamriga, kuwan laan kooxeed waxay saameyn ku yeelan doonaan dhadhanka khamriga ee khamriga Midabka tilmaanta Khamriga, sidaas darteed, jirka iyo ch ...Akhri wax dheeraad ah »